Nghọta Nkọwa Adreesị, Nhazi, na nnweta APIs | Martech Zone
Fraịdee, June 26, 2020 Monday, November 2, 2020 Douglas Karr
Tupu ịmalite ịrụ ọrụ na ntanetị, arụrụ m ọrụ afọ iri na akwụkwọ akụkọ na ụlọ ọrụ na-ezipụ akwụkwọ ozi. Ebe ọ bụ na nzipu ozi ma ọ bụ izipu nkwukọrịta ahịa anụ ahụ dị oke ọnụ, anyị kpachapụrụ anya banyere ịdị ọcha data. Anyị chọrọ otu mpempe n'otu ezinụlọ, ọ bụghị karịa. Ọ bụrụ na anyị nyefere ụyọkọ otu akwụkwọ ozi ahụ kpọmkwem na adreesị, ọ kpatara ọtụtụ nsogbu:
Onye ahia ahia gha ewepu ahia nile.
Mgbakwunye ụgwọ nke nzipu ozi ma ọ bụ nnyefe yana ụgwọ obibi akwụkwọ ndị ọzọ.
Dịka, ọ chọrọ ka anyị kwụghachi onye mgbasa ozi ahụ mgbe ha wetara nnabata abụọ.
Ọzọkwa, adreesị ndị na-ezughi oke ma ọ bụ na-ezighi ezi chọrọ nkwụghachi na ụgwọ nnyefe na-enweghị isi.
Ihe dị ka 20% nke adreesị abanye na ntanetị nwere njehie - mmejọ okwu, nọmba ụlọ ezighi ezi, koodu ezigara ezighi ezi, nhazi usoro nke na-anaghị agbaso iwu nzipu ozi mba. Nke a nwere ike ibute mbupu mbubreyo ma ọ bụ nke na-enweghị atụ, nnukwu nsogbu na ọnụ ahịa maka ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ụlọ na gafee oke.
Address nkwenye adịghị mfe dịka o nwere ike ịdị, n'agbanyeghị. E wezụga okwu mkpoputa, kwa izu enwere adreesị ọhụrụ agbakwunyere na nchekwa data mba nke adreesị nnweta na mba ahụ. Enwekwara adreesị ndị a gbanwere, dịka ụlọ gbanwere site na azụmahịa gaa na nke obibi, ma ọ bụ otu ezinụlọ na-ebi ebe obibi ọtụtụ ezinụlọ, ekenyela ala ubi n'ime agbata obi, ma ọ bụ na-agbanye mpaghara niile.
Usoro Nyocha Adreesị
Adreesị - ya mere nọmba ụlọ, adreesị, ndebiri, okwu mmeghe, wdg.
Ahaziri ahazi - ozugbo emechara, adreesị ahụ gbanwee ka ọ bụrụ ọkọlọtọ. Nke a dị oke egwu n'ihi na 123 Ikpa St. na 123 Main Street ga-ahụ ọkọlọtọ ka 123 Isi St. na oyiri nwere ike dakọtara na wepụrụ.
Adresị ahụ kwadoro - adabara adreesị a kwadoro na nchekwa data mba iji hụ na ọ dị adị n'ezie.
Adreesị - ọ bụghị adreesị niile na-anapụta ka agbanyeghị ha dị. Nke a bụ otu okwu na ọrụ dị ka Google Maps nwere… ha na-enye gị ezigbo adreesị mana enwere ike ọ gaghị enwe nhazi ebe ahụ iji nyefee ya.
Gịnị bụ nkwado Adreesị?
Adreesị nkwado (nke a makwaara dị ka nkwenye adreesị) bụ usoro na-eme ka adreesị okporo ụzọ na adreesị ozi dị. Enwere ike ikwenye na adreesị n'otu ụzọ abụọ: n'ihu, mgbe onye ọrụ na-achọ adreesị na-ezighi ezi ma ọ bụ zuru ezu, ma ọ bụ site na nhicha, nyocha, nhakọ na ịhazi data na nchekwa data megide data nzipu ozi.
Kedu ihe bụ adreesị nkwado? Uru na ojiji ikpe kọwara
Nkwado Adreesị na Adreesị Adreesị (Nkọwa ISO9001)
Ọbụghị ọrụ adreesị niile bụ otu. Ọtụtụ ọrụ nkwenye adreesị ga-eji usoro ịbịaru dabara na nchekwa data. Yabụ, a ọrụ nwere ike ikwu na n'ime zip 98765 na e nwere a Isi Street ọ na-amalite na adreesị 1 wee kwụsị na 150. N'ihi ya, 123 Main St bụ a nti ezinụlọ dabere n'echiche, ma ọ bụchaghị a kwadoro kwuo ebe a ga-enyefe ihe na ya.
Nke a bụkwa nsogbu na ọrụ ndị na-enye ohere na lonjituudu na otu adreesị. Ọtụtụ n'ime sistemụ ndị ahụ na-eji mgbakọ na mwepụ wee jiri ezi uche gbapụta adreesị na ngọngọ ma weghachite latitude na longitude enwere ike. Dị ka ndị na-ere ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, na ọrụ nnyefe na-eji lat / ogologo maka nnyefe anụ ahụ, nke ahụ nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu. Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịbụ ọkara nke ala mgbochi ma enweghị ike ịchọta gị dabere na data siri ike.
Inweta data adreesị
Ana m arụ ọrụ na nnyefe ọrụ ugbu a ebe ndị ahịa na-abanye ozi nke adreesị ha, ụlọ ọrụ na-ebupụ nnyefe kwa ụbọchị, wee na-eduzi ha iji ọrụ dị iche. Kwa ụbọchị, enwere ọtụtụ adreesị agaghị ekwe omume nke a ga-edozi n'ime usoro ahụ. Nke a bụ igbu oge nyere enwere sistemụ ndị nwere ike ijikwa nke a.
Ka anyị na-achọta sistemụ ahụ, anyị na-arụ ọrụ iji dozie ma nyochaa adreesị na ntinye. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji hụ na ịdị ọcha data gị. Nye adreesị izizi, nke enyere egosipụtara na ndị ahịa na ntinye ya ma mee ka ha kwenye na ọ dị mma.
Enwere ụkpụrụ ole na ole ị ga - achọ ịhụ na nyiwe na - eji:
Asambodo CASS (United States) - Coding Accuracy Support System (CASS) na-enyere United States Postal Service (USPS) aka inyocha izi ezi nke ngwanrọ na-agbazi ma jikọta adreesị n'okporo ámá. A na-enye ndị niile na-ezigara ndị ọrụ akwụkwọ ozi, ndị ọrụ ọrụ, na ndị na-ere ngwanrọ CASS asambodo USPS iji nyochaa ogo sọftụwia ha na adreesị ha ma melite izi ezi nke ZIP + 4, ụzọ ụgbọelu ya, yana ọnụọgụ ọnụọgụ ise.
Asambodo SERP (Canada) - Usoro nyocha na mmata ngwanrọ bụ asambodo nzi ozi nke Canada Post nyere. Ebumnuche ya bụ inwale ikike ụfọdụ sọftụwia iji kwado ma dozie adreesị nzipu ozi.
Adreesị nkwenye API
Dịka m kwuru n'elu, ọ bụghị ọrụ nkwenye adreesị niile ka emepụtara - yabụ ị ga-achọ ilebanye anya na nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite. Vingchekwa pennies ole na ole na ọrụ n'efu ma ọ bụ dị ọnụ ala nwere ike ibute gị dollar na nsogbu nnyefe ala.
Melissa na-enye onyinye ugbu a adreesị adreesị n'efu ruo ọnwa isii (ruo ihe ndekọ 100K kwa ọnwa) iji ruo eruo òtù dị mkpa na-arụ ọrụ iji kwado obodo n’oge ọrịa COVID-19.
Enyemaka Melissa COVID-19
Ndị a bụ ihe API ndị na-ewu ewu maka nkwenye adreesị. Ga-achọpụta na ekwughi otu ikpo okwu a ma ama - Google Maps Google. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụghị ọrụ nkwenye adreesị, ọ bụ a geocoding ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ahazi ma weghachite ohere na lonjituudu, ọ pụtaghị na nzaghachi ahụ bụ nnabata, adreesị anụ ahụ.
Dị Mfe - Nkwado adreesị US na nkwenye mba adreesị mba na-eto ngwa ngwa.
Experian - nyocha adreesị maka ihe karịrị mba 240 na ókèala gburugburu ụwa.
otuto - Site na data sitere na mba 240 gburugburu ụwa, Lob na-enyocha ma adreesị ụlọ na nke mba.
Loqate - ihe ngwọta nkwupụta adreesị ga-ejide, parse, hazie, nyochaa, hichaa, ma dezie data adreesị maka ihe karịrị mba 245 na ókèala.
Melissa - na-enyocha adreesị maka mba 240 + na ókèala na ebe ntinye na nza iji hụ na ejidere ụgwọ ịgba ụgwọ na adreesị ụgbọ mmiri na sistemụ gị.
SmartSoft DQ - awade standalone ngwaahịa, adreesị nkwado API na akụrụngwa nke ga - adaba n'ime ngwa a dabere na adreesị gị.
SmartyStreets - Nwere adreesị okporo ámá US nke API, koodu Koodu API, API API Autocomplete, na ngwaọrụ ndị ọzọ iji tinye n'ime ngwa gị.
TomTom - TomTom Online Search si geocoding arịrịọ atụmatụ na-enye ihe ngwọta dị mfe maka ihicha data adreesị ma wuo nchekwa data nke ọnọdụ geocoded.
Tags: adreesị apiadreesị dataadreesị geocodingadreesị parsingadreesị ọkọlọtọadreesị nkwadonyocha adreesịmfeisoxnumxlobloqateMelissa datasmartoft dqTomTom
Ihe nnochi ise kacha elu emere na saịtị Ecommerce